कटहरे बुढी – कथा « paniphoto
« नर्बेमा मध्यरातमा घाम ? सेलिब्रिटी हुनुपर्यो, आकास छुनुपर्यो – व्यंग्य »	कटहरे बुढी – कथा
बुढीले आकाशतिर हेरिन् । पाखुरे डांडाबाट आकाशमा तीनतारे ताराहरु ओर्लन लागेका थिए । बिहान मिर्मिरे उज्यालो हुन लागेको थियो । चन्द्रमाको उज्यालो बिस्तारै हराउंदै थियो र पूर्वबाट सूर्यले आफ्ना लालीका तीखा बांणहरु क्षीतिजतिर फाल्दै थियो । टौवाको टुप्पोमा बसेर काग मुण्टो हल्लाउंदै कराइरहेको थियो । घर अगाडि बकैनाको रुखको टुप्पोमा बसेर चिबे चरो तल र माथि गर्दै चिच्चाउंदै थियो । घर अगाडिको गिदेरीको रुखको हांगामा धोबीचरी नानाथरी भाका निकालेर गायककारले झैं चुच्चो नचाउंदै गाइरहेको थियो । तल खोल्सातिरको बांसघारीमा डांग्रेका बथानहरु चिच्चाइरहेका थिए । पल्तीर गुरुङ्ग गाउंमा कुखुराको भाले बासिरहेको थियो । तल सालघारीमा बिभिन्न थरी चराहरु प्रभातलाई स्वागत गर्दै मीठा मीठा गीतहरु गाउँदै रमाइरहेका थिए । घरको पालीमा घरजम गरी बसेका गौथलीका जोडीहरु आहार खोज्न जाने कुरामा आपसी सरसल्लाहा गरिरहेका थिए भने कटहरे बुढीको पिँढीमा परेवाका जोडीहरु फनफनी नाच्दै धुरधुराइरहेका थिए ।
गोठमा गाइ कराउन थाल्यो । गाइको साहारा पाएपछि गोरु र भैंसीहरु पनि चलवलाउंदै उठ्न थाले र आफ्नो नित्यकर्म गर्न थाले । कटहरे बुढी टौवामा हाम्फालिन र सकि नसकी पराल थुतेर सबैलाई अंशवण्डा गरिदिइन् । खोरभित्र सबै बाख्रा कराउन थाले । अघिल्लो बर्षसम्म एउटा मात्र जन्माउने सिंगारीले अहिले दुई वटा जन्माएकोमा बुढी प्रसन्न थिइन । खोरभित्रको खराने बोकोले अरुलाई देखि नसहने भएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जुम्ल्याहा पाठापाठी मान्छे सुत्ने घरको मजेरीमा नै थुन्सेमा नै कैद थिए । कटहरे बुढी बकैनाको रुखमा चढिन् र हंसियाले ४ वटा हांगा छिमलेर टाट्नोमा झुण्ड्याइदिइन । सिंगारीलाई मात्र बाहिर ल्याउने उद्येश्यले खोरको ढोका बिस्तारै खोल्न थालिन । सिँगारीले जवरजस्ती ढोका ठेलेर बाहिर आइ र बुढीले ढोका थाम्न सकिनन् । त्यस पछि खराने बोकोले फेरी बलपूर्बक ढोका ठेल्यो र बाहिर आयो । उ आएको देखेर बांकी बसेका भुराभुरी समेत गरी ९ वटा बाख्राहरु बुढीलाई हेप्दै जबरजस्ती बाहिर निस्केर सिंगारीको टाट्नोमा राखेको घांस डाईलंदै खान थाले । बुढीलाई रीसको सीमा रहेन । सबै बाख्रालाई पालैपालो सराप्दै बाध्न थालिन । यहि हल्लीखल्ली बीचमा छोरो हर्कै आंखा मिच्दै उठ्यो र सिलोटको थोत्रो भांडोमा पानी खन्याएर दिशा बस्न मड्किनाको झाडीतिर लाग्यो । बुहारी दैलो पोत्न थाली र नाती नातिनाहरु जुरुक्क ओच्छ्यानबाट उठेर रुन र कराउन थाले । कटहरे बुढी जसलाई ७ वर्षको उमेरमा ३५ बर्षको बुढासंग बाबुआमाले बिहे गरिदिएका थिए । गाउंलेहरुले ‘मामाघर जाने है नानी’ भन्दै फकाएर २ वटा सेलरोटी हातमा राखिदिएपछि उनी रमाउंदै डोली चढेकी थिइन् । घर पुगेर डोलीबाट उत्रेपछि मामा माइज्युलाई नदेखेर रोएकी उनीलाई उनकी मोटी थसुल्ली सासुले एक गिलांस दुध पिउन दिएपछि उनी फुलिएकी थिइन् । १४ बर्ष पुगेपछि हर्के जन्मियो । त्यसपछि जन्मेका ६ सन्तान मध्ये ४ सन्तान रोग नै पत्ता नलगाई खेर गए । कान्छी छोरी बाबु टोकाहामा परी र एक्लो हर्के बुढीको बुढेसकालको साहारा बन्यो । उनको लोग्ने भारततिर नोकरी गर्दागर्दै उतैतिर कान्छी देशी स्वास्नी राखेको खबर उनले पाएकी थिइन । घरमा एक पैसा पठाएको बुढीलाई थाहा छैन । तैपनि बेलाबखत उ घर आउंथ्यो र उनको पेटमा कालको नासो छोडेर जान्थ्यो । भारतमा दुर्घटनामा परी उ मरेको खबर आयो । उनका चुरा फुटे र कर्म सबै लुटियो । उनको पाखो बारीमा रहेको ठूलो कटहरको बोटको कारण कटहरे बुढीको नामकरण भएकी उनको बास्तबिक नाम उनको छोरो हर्केलाई समेत थाहा छैन । लोग्ने मरेपछि दिनभर चन्द्रकान्त मुखियाको घरखेतमा काम गर्ने र सांझ परेपछि उसकै ढिकी जांतो गरेर दिनरातको मेहनत स्वरुप २ मुठी कनिका घरमा लगी छोरालाई खुवाउंथिन् । बिहान बेलुका आमालाई काममा सघाउने छोरी मरेपछि बुढिलाई काममा सघाउने कोहि थिएन । एउटा छोरालाई काममा लगाउं भने खिएर जान्छ भन्ने मायांले हर्केलाई गिठा र भ्याकुर नै उसिनेर आफु भोकै बसेर भए पनि अघाउने प्रयत्न गरेकी थिइन् । त्यसो त बुढीको दशै मुखियाको घरको २ मुठी रौतुवाले टर्ने गर्दथ्यो र हर्केले पनि मुखियाको छोरोले फालेको कपडाहरुबाट नै दशै मनाउंथ्यो । लोग्ने जिवितै हुंदा पनि उनको सुत्केरी अबस्था पनि मुखिनीलॆ मुखियाको आंखा छलेर दिएको एक चौथाई ध्यु र ४ माना चामलले टर्ने गर्दथ्यो । लोग्ने मरेको बर्ष आएको बाढिले उनको गरी खाने सानो टारी खेत पनि खहरे खोलामा बिलाएपछि उनको जमिनको नाममा त्यहि ओत लाग्ने सानो घर थियो जुन घरभित्रबाट रातमा तारा गन्न पनि सकिन्थ्यो । पछि छोराले दिनभर निमेक गरेर उजिन्नीमा कमाएको टारीको पाखोले अहिले हर्केको परिवारलाई २ महिना खान पुग्ने सांगो जुटेको छ ।
कटहरे बुढी टारीको पाखोमा मकै गोड्दै थिइन । ६० बर्ष नाघेकी बुढीले कोदालो खन्न थालेको ५ घण्टा बितेछ । घरमा बुहारीले खान बोलाउली र जाउंला भनी दुखेको ढाड सोभुयाउंदै फेरी कोदालो जोत्दै थिइन । रङ्ग पनि छुटृाउन नसकिने मैलो खद्दरको पटुकाले पसिनाको धारा पुछ्दै खुइयऽऽ गर्दै सास फेर्थिन र सेतै फुलेको आफ्नो टाउको घरतिर फर्काउंछिन । नाती नातिना िपंढीमा पढिरहेका थिए । बुहारी ढोका भित्र र बाहिर गर्दै थिई । हर्के गोठ अगाडी बाचरोले दाउरा चिर्दै थियो । पल्लो डांडामा बिबाहको पाचैबाजा बजिरहेको थियो । बुढीले आंखा बारीतिर लगाइन । सन्ते कामीको छोरो पर्खालै पर्खाल चढेर बेलौंतीको बोटतिर दौडेर आयो र रुखमा चढेर कांचो पेटमा बेलौंती टिपेर खान थाल्यो । कति जतनले नाति नातिनाले खालान् भनी सांची राखेको बेलौंती कामीको छोरोले खाएकोमा बुढीलाई रीसको पारो चढ्न थाल्यो । कोदालो उज्याएर सराप्दै बुढी बेलौंतीको बोटतिर हान्निदै गइन् । बुढी त्यहां पुगिाजेल त्यसले ३ वटा बेलौंती खाएर ७/८ वटा बेलौंती जांगेको गोजीमा कोचेर दौडिसकेको थियो । बिहानको दश बजिसकेको थियो । बैशाखे खडेरीमा एकतारको घामले बुढीको मुटु नै छेडिसकेको थियो । भोकले भाउन्न भएर लड्छु कि भन्ने स्थितिमा उनी पुगेकी थिइन् । भोकले सहन नसकी उनी पर्खाल नाघेर धारातिर लागिन् र पानीले भोक मेटाउने कोशिस गरिन् । कटहरको रुखको छाहारीमा एकछिन सुस्ताइन । त्यसपछि बुढिलाई कसैले उचाल्न थालेजस्तो भयो । उचाल्दा उचाल्दा उनी आकाशतिर उड्न लागिन् । उनी रमाइलो मानेर तलतिर हेरिन् । छोरो हर्के आमालाई खाना खान बोलाउंदै थियो । आमा नबोलेपछि उक्कासी उ बोलाउन छोडेर कान्ला कान्लै हाम्फाल्दै कटहरको बोटतिर हान्निदै पुग्यो र आमालाई झक्झक्याउन थाल्यो । माथिबाट बुढीले उसकी आमा उठेको देखिनन् । हर्के डांको छोडेर रुन थाल्यो । नाति नातिनाहरु हर्केसंगै रुदै थिए । बुहारी गुनियाको सप्कोले आंशु पुछिरहेकी थिई । एकै छिनमा गाउंलेहरु भेला भए र बुढीलाई तुलसीको मोठ नेर लगेर सुन पानी ख्वाउन लागे । भर्खरै धाराको पानीले अघाएकी बुढीले निकै मुस्किलले सुनपानी खाइन । त्यो दृष्य बुढीले आकाशबाट निकै रमाइलो मानेर हेरिरहिन् । भित्र चुल्होमा भात डढिसकेको थियो । खराने बोको दाम्लोबाट घांटी छिराई फुत्केर सुकाएको मकै खान थालेको थियो । गज्जुवा गोरु दाम्लो चुंडालेर मकैबारीमा पस्यो र बुढिले भर्खरै गोडेको मकै धमाधम खान थाल्यो । कटहरे बुढीले त्यो दृष्य रमाइलो मान्दै हेरिरहेको थिइन् । जीवनभर नर्कमा बसेकी कटहरे बुढी स्वर्ग गइन् कि नर्कमा त्यो त कसैले अनुमान गर्न सकेन । त्यतिखेरसम्म बुढीको शरिरलाई गाउंलेहरुले बाध्ने प्रबन्ध गर्दै थिए र गज्जुवा गोरुले बुढीले गोडेको आधाजसो मकै फांडिसकेको थियो । उनी चािहं अब धेरै नै माथि पुगिसकेकी थिइन् ।
« नर्बेमा मध्यरातमा घाम ? सेलिब्रिटी हुनुपर्यो, आकास छुनुपर्यो – व्यंग्य »	LeaveaReply Cancel reply	You can use these HTML tags
यही Category बाटनक्साको पुरुष – कथागर्मीमा पग्लिँदा वैँशहरुब्यूटिफूलअतृप्त प्यास – कथासेविका – कथास्वार्थी संसार – लघुकथामौन प्रेमी – कथापुस्तकालयको रातो भित्तो – कथामसली भाउजु – कथामरुभूमिमा श्वेत सुन्दरी – कथाOnline Users5 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार